CIN Khabar दोर्दीमा बगेका ११ मजदुरमध्ये ४ जनाको शव भेटियो, दुईजनाको सनाखत
दोर्दीमा बगेका ११ मजदुरमध्ये ४ जनाको शव भेटियो, दुईजनाको सनाखत सात मजदुर अझै बेपत्ता
शान्ता कमली बिहिबार, साउन ९, २०७६, ०७:५९:००
रेडियो लमजुङ, लमजुङ
लमजुङको दोर्दी खोलामा आएको बाढीले बगाएका ११ मजदुर मध्ये ४ जनाको शव फेला परेको छ । सातजना अझै बेपत्ता छन् ।
भेटिएको ४ शवमध्ये दुईजनाको सनाखत भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. डिजन भट्टराईले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो ।
पर्साका २८ वर्षका शिवधन चौधरी र डडेलधुराका ३४ वर्षका रमेश बुढाको पहिचान खुलेको उहाँले बताउनुभयो । दुईजनाको भने अझै सनाखत हुन सकेको छैन ।
हिजो दिउँसो साढे २ बजे आएको बाढीले दोर्दी खोलामा निर्माणाधीन २५ मेगावाट माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत मजदुरलाई बगाएको थियो ।
शिरतिर थुनिएको खोला अचानक उर्लिएर आएपछि मजदुरको भागाभाग भएको थियो । सो खोलामा ५४ मेगावाटको सुपरदोर्दी र २५ मेगावाटको अपरदोर्दी जलविद्युत् परियोजना निर्माणाधीन छन् ।
सुपरदोर्दीका १५ मजदुरलाई बाढीले सुरुङमा हालेको थियो । उनीहरूको उद्धार भएको छ । तर, अपरदोर्दीका ११ मजदुरलाई बाढीले बगाएको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. भट्टराईका अनुसार तीनजनाको शव नौथरसेरा र एकजनाको शव कीर्तिपुर बेँसीमा फेला परेको हो । सातजना बेपत्तामध्ये आज बिहानसम्म कोही पनि सम्पर्कमा नआएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सातजना बेपत्तामध्ये आज बिहानसम्म कोही पनि सम्पर्कमा नआएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बाढीले बगाएर ९ जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये ६ जना माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ का कामदार हुन् । अन्य तीनजना निर्माणाधीन ५४ मेगावाटको सुपरदोर्दी ‘ख’ जलविद्युत् आयोजनाका कामदार भएका बताइएको छ । उनीहरूको उपचार भइरहेको दोर्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओमबहादुर गुरुङले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो ।
दोर्दीखोलामा आएको बाढीले जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणाधीन ड्याम क्षेत्रमा क्षति पुर्याएको छ भने स्थानीय विस्थापित भएका छन् । सुरक्षार्थ बसेको नेपाली सेनालाई पनि विस्थापित बनाएको अध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो ।
सीआईएनसँगको कुराकानीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीले हिजो अबेर रातिसम्म बेपत्ताको खोजी गरेको र बिहानैदेखि फेरि खोजि कार्यलाई जारी राखिएको बताउनुभयो । राती अँध्यारोमा उद्धारको काम गर्न समस्या भएको र बिहानैदेखि जुटेको प्रजिअ भट्टराईको भनाइ छ ।
राती अँध्यारोमा उद्धारको काम गर्न समस्या भएको र बिहानैदेखि जुटेको प्रजिअ भट्टराईको भनाइ छ ।
लमजुङको बेँसीसहरबाट माथि दोर्दी खोलामा हाम्रो लिबर्टी इनर्जीले २५ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना बनाइरहेको छ । हाम्रोभन्दा माथि ५४ मेगावाटको सुपरदोर्दी जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माणाधीन छ ।
हिजो दिउँसो अचानक भयानक बाढी आएपछि सुपरदोर्दीमा त्रास फैलिएको थियो । पावरहाउसमा भएका सबै सुरक्षित स्थानमा पुग्न सकेपनि ‘हेड वर्क्स’ का मजदुरहरूले भाग्ने पर्याप्त समय नपाएपछि ठूलो मानवीय क्षति भएको हो ।
स्थानीयले ७०–८० वर्षमा कहिल्यै नदेखेको बाढी आएको बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन ९, २०७६, ०७:५९:००
माडी नगरपालिका १ का अध्यक्ष आमरण अनशनमा
प्रदेश २ मा ऐनविपरीत करार कर्मचारी नियुक्त
शिक्षा आर्जन गर्ने थलो बन्दै कारागार
फरार अभियुक्त रौनियारको खोजी जारी
के प्रधानमन्त्रीको नगर मूलुककै शक्तिशाली नगर हो ?
धेरैवटा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू छन् । राजनीतिमा मेयरको सिधै पहुँच मुलुकका प्रधानमन्त्रीसँग छ । मेयर रोमनाथ ओली उहाँकै घरमा बसिरहनु भएको छ । त्यस हिसावले पनि दमकलाई शक्तिशाली नगरपालिका भनिंदो रहेछ । शुक्रबार, फागुन ९, २०७६
सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । बास्कोटाले आफूबारे प्रश्न उठेकाले पदबाट राजीनामा दिएको सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराउनुभएको हो । बिहिबार, फागुन ८, २०७६
कैदी बन्दी मध्येकाले अरूलाई सिकाउँछन् । पढ्दै र पढाउँदै गरेका सबै सजाय काट्न आएका कैदी बन्दी हुन् । विभिन्न समस्याले पढ्न नपाएका र पढ्दापढ्दै बिचमै छाडेकालाई कारागारमा पढ्ने व्यवस्था गरिएको हो । बिहिबार, फागुन ८, २०७६